आज बार्सा र युनाइटेडविच भिडन्त, कस्ले मार्ला बाजी ? - Everest Dainik - News from Nepal
आज बार्सा र युनाइटेडविच भिडन्त, कस्ले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वार्टरफाइनलको दोस्रो लेगमा आज (मंगलबार) राति स्पेनिस महारथि बार्सिलोना र इङ्लिस जाइन्ट किलर म्यानचेस्टर युनाइटेड भिड्दैछन् । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा हुने दोस्रो लेग निकै रोचक हुने अनुमान गरिएको छ ।
ट्याग्स: barsa vs united